Yar Laakiin Weyn: Iibka gudaha Dutchtown • DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
Yar Laakin Xoog Leh: Iibka gudaha Dutchtown
Posted on Oktoobar 31st, 2021
Ma waxaad raadinaysaa meel bannaan oo aad adigu wacdo? Ka hel booskaaga cabbirka saxda ah qiimaha saxda ah ee Dutchtown! Xaafaddeenu waxay ku siisaa lacagta ugu badan ee lacagtaada leh guryo taariikhi ah oo si adag loo dhisay, meel ku habboon, deris saaxiibtinimo, iyo mustaqbal xiiso leh.
Hoos waxaa ah dhowr liisaska hadda firfircoon ee Zillow ee guryaha qiimahoodu yar yahay iyo kuwa cabbirkoodu yar yahay. Laakiin waxaa jira wax qof kasta oo Dutchtown ah! Haddii aad raadinayso wax yar ama weyn, hubi inaad baadho liisaska xaafaddayada iyo baro waxa Dutchtown ka dhigaya mid weyn.
Gurigan lebenka caadiga ah wuxuu bixiyaa wax badan oo ku jira xirmo yar oo u muuqda. Waxaad heli doontaa saddex qol oo jiif ah iyo laba musqul oo buuxa, oo leh meel ka badan inta ay isha la kulmaan iyada oo ay ugu wacan tahay qorshooyinka dabaqa furan iyo sagxad hoose oo si fiican u dhammaatay. Intaa waxaa dheer waxaad dhowr tallaabo u jirta dukaamada iyo makhaayadaha ku yaal Downtown Dutchtown ee ku teedsan Meramec.
$ 139,900 · Ka eeg Zillow
Qaab dhismeed ahaan cajiib ah, kan yar laakiin qurxoon laba qol jiif/hal musqul ah ayaa leh tiro badan oo warshad asal ah, albaabo jeebka ah, saqafyo sare, iyo sagxad weyn oo dhabarka ka baxsan.
$ 115,000 · Ka eeg Zillow
Ka hel isku dhafka taariikhiga ah iyo midka casriga ah ee labadan qol/labada musqul ee bungalow oo galbeedka ka xigta Grand. Dabaqyada alwaaxyada ah, daaqadaha dhalooyinka leh, iyo meel dabka lagu qurxiyo ayaa keena soo jiidashada hore ee adduunka, halka jikada cusub ee qurxoon ay bixiso ku habboonaanta iyo shaqeynta. Gurigan wuxuu leeyahay qayb hoose oo la dhammeeyey iyo garaash hal baabuur ah oo ka weyn.
$ 159,900 · Ka eeg Zillow
Fiiri tan dhalaalaya oo farxad badan laba sariir/laba guri oo musqul ah oo leh meel dabka lagu shido, albaab jeebka, alwaax asal ah, iyo in ka badan. Waxa kale oo jirta sagxad weyn oo gadaal ka soo baxaysa oo u socota dayr dayr leh.
$ 110,000 · Ka eeg Zillow
Saddexda qol ee jiifka ah/hal musqul ah ayaa leh meel dabka lagu shido oo qurux badan iyo armaajooyin la dhisay oo kala saaraya qolka fadhiga iyo qolka cuntada ee rasmiga ah, oo lagu daray jikada casriga ah ee quruxda badan oo leh jaranjaro hilib hilib ah iyo tuubo jet musqusha dhexdeeda.
La wadaag qoraalkaan Facebook, Twitter, ama maraya Email. Qoraalkan ayaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay Oktoobar 31st, 2021 .
DutchtownSTL.org Estate Real Yar Laakin Xoog Leh: Iibka gudaha Dutchtown